Mac အတွက် Aerial ကို အထင်ကြီးလောက်စရာ စခရင်ခြာများ | ငါ mac ကပါ။
ဟိုနေ့က ကျွန်တော့်မိန်းမ မီးဖိုချောင်မှာ ကော်ဖီသောက်ရင်း တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်ရောက်ပြီး သူကြည့်နေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ စကားစမြည်ပြောကြတယ်။ ရုတ်တရတ် စကားမပြောဘဲ သဲကန္တာရတောင်တန်းတွေရဲ့ အထင်ကြီးလောက်စရာ ဝေဟင်မြင်ကွင်းတွေကို ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ကြည့်ရတာ သဘောကျသွားတယ်။ စခရင်စခရင်က ခုန်သွားတယ်။ Apple က TV ကို. တစ်မိနစ်လောက်ပြောနေတာတွေကို မေ့သွားတယ်။
လျှောက်လွှာနှင့်အတူ လေနှင့်ဆိုင်သော macOS အတွက်၊ သင်သည် သင်၏ Mac တွင် အံ့မခန်း Apple TV စခရင်ခြာများကို ခံစားနိုင်သည်။ ယခု ၎င်းကို tvOS 3.0 တွင် Apple မှ နောက်ဆုံးပေါ် စခရင်ခမဲ့များ အပါအဝင် ဗားရှင်း 15 သို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။
Aerial သည် macOS အတွက် open source application တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့် Mac တွင် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Apple TV ဖန်သားပြင်ဆာဗာများကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအက်ပ်အား ဗားရှင်း 3.0 သို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပြီး Apple TV screensavers အသစ်များသာမက Apple TV အသစ်များကိုပါ ယူဆောင်လာပေးပါသည်။ tvOS 15Apple Music ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ယခင်ဗားရှင်းထက် တိုးမြှင့်ထားသော cache ဆက်တင်များကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။
မှ Apple က TV ကို စတုတ္ထမျိုးဆက်မှစတင်၍ ဤစက်ပစ္စည်းများတွင် “Aerial” ဟုခေါ်သော စခရင်စခရင်ခန်ဆာများ အစုအဝေးရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အနှေးပြကွက်များဖြင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ရှုခင်းများပေါ်တွင် ပျံသန်းနေသော စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဗီဒီယိုများဖြစ်သည်။
tvOS 15 အတွက် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ဖြစ်သည့် Apple TV ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ကုမ္ပဏီက မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ မျက်နှာပြင်အားထိန်းကိရိယာအသစ် 16 ခု ဘယ်ဟာက ပိုထူးခြားလဲ။ Aerial 3.0 ကို သင်ထည့်သွင်းပါက ၎င်းတို့ကို ယခုအခါ Mac တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုအသစ်များအပြင်၊ ယခုနှစ်အပ်ဒိတ်တွင် အသုံးပြုသူများသည် မည်သည့်စခရင်ဆော့ဖ်ဝဲကို အလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်စေမည့် Now Playing panel အသစ်ကိုလည်း ယူဆောင်လာပါသည်။ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် သို့မဟုတ် နာရီနှင့် ပေါင်းစည်းမှုတို့ကိုပင် ပြသရန် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများလည်း ရှိသေးသည်။ Apple ကဂီတ y Spotify.
macOS အတွက် Aerial 3.0 ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့၎င်းကို ၎င်းတို့၏ဆိုက်မှ သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်. macOS Sierra (ဗားရှင်း 10.12) သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုသည့် Mac လိုအပ်သည်။ တပ်ဆင်ရကျိုးနပ်သည်။ Apple TV ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စခရင်စခရင်များကို ကြည့်ရင်း သင်ဖမ်းမိသွားလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » Mac အတွက် Aerial ကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော စခရင်ခြာများအသစ်ဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါသည်။